WAMKELEKILE kwizindlu zanamhlanje ezihonjisiweyo kwisakhiwo esilungele izibini. Ine-22 sq/m, umgangatho we-3 kunye ne-elevator kunye ne-aroud 800m ukusuka kumbindi wesixeko. Icocekile, intsha kwaye iqaqambile ngazo zonke izinto eziluncedo ukuze uhlale kamnandi. Ine-WI-FI, i-cable TV, ukufudumeza, i-AC, indawo yokupaka, iifestile ezinombono kwi-"Stara planina" entabeni kunye neziko lesixeko.
Ubumelwane bunayo yonke into eyimfuneko, iindawo zokutyela ezigqwesileyo, ivenkile enkulu, iivenkile zokubhaka, iofisi yokuTshintshiselana, iiVenkile, iMarike kunye nonxibelelwano olulula nako konke okubalulekileyo esixekweni.
Le ndlu intle kwaye ibanzi inebhedi enkulu yokumkanikazi (160x200cm), isofa, iTV, ikhabethe, indlu yangasese yanamhlanje enekhabhathi yokuhlamba, ikhitshi elinezixhobo ezitsha ezinje ngefriji encinci, i-cooker, iketile, ubungakanani obahlukeneyo beeglasi zamanzi, iwhisky, iwayini, irakija, iikomityi zekofu kunye neti, kunye nayo yonke into eyimfuneko ekutyeni okukhawulezayo.
Ifulethi liya kucoceka ngokugqibeleleyo xa ufika kwaye ukucocwa kokugqibela kusimahla. Ukucoca nako kunokulungiswa kwiindleko ezongezelelweyo ngexesha lokuhlala kwakho ngokwesicelo sakho.
Nokuba undwendwela ishishini
okanye ulonwabo, i "Sogni D'oro" inika amava obusondeleyo.